IWashington - Wikipedia
IWashington, DC, ngokusesikweni iSithili saseColumbia esikwabizwa ngokuba yiDC okanye yiWashington kuphela, ilikomkhulu laseMelika, ibekwe kuMlambo iPotomac emdeni waseMaryland naseVirginia. Isixeko sabizwa ngokuba nguGeorge Washington, umongameli wokuqala wase-United States kunye noBawo oSekwayo, kwaye isithili somanyano sabizwa ngegama likaColumbia, isimntwiso sesizwe. Njengesihlalo sikarhulumente wase-US kunye nemibutho eliqela yamazwe aphesheya, isixeko siyinkunzi ebalulekileyo kwezopolitiko. Sesinye sezixeko ezityelelweyo eMelika, sibona ngaphezulu kwe-20 yezigidi zeendwendwe ngo-2016.
Izizwe ezahlukeneyo zabantu abathetha iAlgonquian Piscataway (ekwabizwa ngokuba yiConoy) bahlala kumazwe ajikeleze uMlambo iPotomac ngethuba amaYurophu aqala ukutyelela londawo ekuqaleni kwenkulungwane ye-17. Elinye iqela elaziwa ngokuba yiNacotchtank (ekwabizwa ngokuba yiNacostines ngabavangeli bamaKatolika) lagcina iindawo zokuhlala ezingqonge uMlambo iAnacostia kwiSithili saseColumbia sanamhlanje. Impixano nabakholoniyali baseYurophu kunye nezizwe ezingabamelwane banyanzelisa ukufuduswa kwabantu basePiscataway, abanye babo baseka indawo entsha yokuhlala ngo-1699 ngasePoint of Rocks, eMaryland.
Kwincwadi yakhe yaseburhulumenteni enguNomb. 43, epapashwe nge-23 kaJanuwari, 1788, uJames Madison wathi urhulumente omtsha wobumbano uzakufuna igunya kwikomkhulu lesizwe ukubonelela ngolondolozo nokhuseleko. Kwiminyaka emihlanu ngaphambilana, iqela lamajoni angahlawulwanga lalingqonge iCongress ngelixa amalungu ayo ayedibene ePhiladelphia. Esaziwa njengePennsylvania Mutiny yowe-1783, lo msitho wagxininisa imfuneko yokuba urhulumente wesizwe angaxhomekeki kulo naliphi na ilizwe kukhuseleko lwayo.
Inqaku lokuQala, iCandelo leSibhozo, loMgaqo-siseko livumela ukusekwa "kweSithili (esingekho ngaphezulu kweshumi leemayile isikwere) kangangoko, ngokwenziwa kwamazwe athile, kunye nokwamkelwa kweCongress, ukuba ibe sisihlalo sikarhulumente waseMelika".Nangona kunjalo, uMgaqo-siseko awuyichazi indawo eyinkunzi. Kwindawo eyaziwa ngoku njengesiVumelwano sika-1790, uMadison, uAlexander Hamilton, noThomas Jefferson bavumelana ukuba urhulumente wobumbano uzakuhlawula amatyala aseleyo eMfazwe oguquko ngenjongo yokuseka ikomkhulu lesizwe elitsha eMazantsi eUnited States.
George Washington[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
UGeorge Washington wayengumongameli wokuqala we-United States ukusuka ngo-1789 ukuya ku-1797.Washington ukhokele imikhosi yokuthand 'izwe ekuphumeleleni kwimfazwe yaseMelika yoHlaziyo.uWashington wayebizwa ngokuba nguyise wesizwe.Usapho lwaseWashington lwalusisityebi losapho lwaseVirginia olwalutyala olwenza ubutyebi balo ngokuqikelela umhlaba kunye nokulinywa kwecuba
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-24 EyeSilimela 2021, kwi-08:21